musha Europe vatambi Javier Bardem Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Javier Bardem Biography inounza kwauri Chokwadi pane yake Yehucheche Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Mudzimai, Mararamiro, Net Kukosha uye Hupenyu Hwega.
Tine pano, chinyorwa chipfupi chinounza iwe zvinoitika muhupenyu hwake kubva panguva dzake achiri mudiki kusvika mukurumbira wake. Kubva pakuberekwa kusvika pakukwira, heino pfupiso ye Javier Bardem's Bio.
Hongu, zvinokwanisika kuti iwe ungadai wakaona mashoma emamuvhi ake uye nekuda kweizvozvo, wakamutumidza seimwe yaunofarira pakati Vatambi veEuropean. Kana iwe usati uchinzwa nezvake, hapana chikonzero chekufunganya. Gara wakabatana apo isu tichizadza iwe mune yake inonakidza nhoroondo yehupenyu.
Javier Bardem Yemwana Nhau:
Kune ake ekutanga biography, mutambi wechiSpanish ane mazita ake azere saJavier Ángel Encinas Bardem. Akazvarwa pazuva re1st raKurume 1969 kuna amai vake, Pilar Bardem nababa, José Carlos Encinas Doussinague muguta guru reLas Palmas de Gran Canaria, Canary Islands, Spain. Tarisai, isingawanzo pikicha yehucheche yaJavier Bardem.
Mudiki Javier Bardem- Makore Ekukura-kumusoro:
Asati akura, mutambi wechidiki wechiSpanish aipedza nguva kumitambo uye kumafirimu. Kunyangwe Javier aive mukomana anonyara. Sezvo paChitanhatu, akaita yake yekutanga firimu kutaridzika muFernando Fernán Gómez's El Pícaro (Iyo Scoundrel).
Kuve nekukura pakati pemhuri yevatambi, haana kumbozviona iye seActor. Pane kudaro, akatamba rugby uye akambomiririra Junior Spanish National Team. Javier Bardem uye
vanun'una vake vakuru vakarerwa naamai vavo. Heuno iye aine vaanotamba navo pamberi pemutambo werugby.
Mhuri yaJavier Bardem Nhoroondo:
Mune imwe kudzivirira imba yake kubva kunzara, amai vake vakachinja mabasa kupfuura nguva. Chokwadi ndechekuti, vabereki vaJavier Bardem vakarambana achiri mudiki. Amai vake vaimusimudza iye pamwe nevakoma vake vakuru vese vega mushure mekunge baba vake vavasiya. Kare ikako, vaive vasina zvishoma zvekufamba nazvo, zvine chekuita nechikafu, zvipfeko uye pekugara.
Mhuri yaJavier Bardem Kubva:
Kunyangwe hazvo Javier Bardem achitaura Chirungu zvakanaka, mutauro wake wekuzvarwa iSpanish. Iye zvino ngatitarisei kumadzitateguru ake. Rimwe remazita ababa vake, Doussinague ndiBasque; dzinza rekumaodzanyemba kweEuropean rinogara muSpain neFrance, zvichiteerana.
Zvichakadaro, zita raamai vake, Bardem, chiCatalan; mutauro unotaurwa nevanhu muCatalonia Valencia. Sekuru vababa vaJavier vanobva kuGuijuelo, Salamanca, Castile neLeon, Spain. Sekuru-ambuya vake, Flora chikamu chiCatalan, Chirungu, uye chizvarwa cheIrish.
Pakupedzisira, sekuru vake amai, Rafael Bardem Solé akaberekerwa muBarcelona, ​​Catalonia, Spain. Heino mepu inoratidza midzi yaJavier Bardem. isu tiri munzira chaiyo yekudaidza Javier Bardem, muSpanish.
Javier Bardem's Dzidzo:
Pamwe pamwe nebasa rake rekuita, akawana zvikwiriso zvakasiyana zvekudzidzisa kubva kupuraimari kusvika kumazuva ake ekoreji. Zvichakadaro, aine ruzivo rwakadzama mukupenda, Bardem akafunga zvekuve mupendi akadaro akadaro achiendeswa kufunda Kupenda paMadrid Escuela de Artes y Officios. Kunyangwe akazo siya kupenda nekuti akazoona kuti kwaive kusiri kufona kwake.
Javier Bardem Nhau Yebasa- Kubva Kumazuva Ekutanga:
Destiny vanoti inogona kunonoka asi isingarambwe. Kunyangwe kupenda kwaive rudo rwekutanga rwaBardem, iye, mushure mekufunga kushoma, akazopedzisira ave kuita mashoma mashoma mabasa. Akambo shanda se bouncer, mushandi wekuvaka, munyori, uye kunyangwe semubvuri, uko kwaakatariswa zvakanyanya - kunyanya kubva kuvakadzi. Hechino chidiki chap usati wafunga kuve muActor.
VERENGA Alvaro Morte Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Javier Bardem's Biography- Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
Makore mashoma gare gare, akatamira mukuita. Pasina nguva, akaratidza kuti aipfuura chiratidzo nekuhwina mubairo weGoya (mubairo wefirimu wenyika yeSpain) semutambi anonyanya kutsigira Performance yake muDías contados (1994; Kumhanya Kunze Kwenguva) semudhakwa. Heano maitiro aanotarisa mukati memakore ake ekutanga ekuita.
Sezvo nguva yakafamba, akazova mudiwa kune vazhinji vekuSpain vanoda mafirimu; uye sosi yeMufaro kuSpain.
Kukwira kwaJavier Bardem Mukurumbira:
Kuva nyeredzi yakakosha muSpain, Bardem akaramba asingazivikanwe kune vateereri vepasi rese kusvika 2000. Panguva iyoyo, akaita nyeredzi saReinaldo Arenas, mufirimu; Pamberi pehusiku Falls, yaive yekutanga firimu remutauro weChirungu. Iyo feat yakamuona achiva iye wekutanga muSpanish kusarudzwa kune iyo Academy Mubairo semutambi akanakisa.
Nekuda kwemukurumbira wake mutsva mumabhaisikopo echirungu, akazoisa pfungwa dzake pauri. Akaonekwa muNo Nyika yeVakwegura semhondi uye akawana kumwe kusarudzwa kwaOscar kubva mufirimu Biutiful muna 2010. Akaratidza zvakare muna 2012 James Bond's Skyfall uye "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" - (2017).
Javier Bardem, pasina mubvunzo, akapembererwa pasi rose. Anova wechitatu pakati pe pamusoro 25 vatambi veSpanish vakanyanya by IMDb. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Ndiani javier bardem akaroora kuna:
Zvinokufadza iwe kuziva kuti Javier aive nehukama hwakareba naCristina Payés. Musikana uyu anga achidzidzisa Chirungu kuna Javier, uye nekudaro vakafarirana uye vakagara vese. Vakafambidzana kweanenge makore gumi. Nehurombo kana kwete, vaviri vacho havana kuzomboroora.
Yake yechipiri nyaya yerudo yakatanga pane bhaisikopo rakagadzirirwa "Gungwa Mukati." Javier aive nehukama naMaria Belen Rueda Garcia-Porrero, mukadzi akaroora uye amai vevana vana. Zvinonakidza zvakakwana, sezvo kupfura kwaguma, saka hukama zvakare.
Nekudaro, mu2008, ndichiri kushanda pane iyo bhaisikopo; Vicky Cristina Barcelona. Humwe hukama hwakatanga naPenélope Cruz, sekushanda kwavo pamwe chete. Zuva racho kunyange hazvo rakareba rakatungamira kumuchato. Mhemberero yeMuchato yakaitika kuThe Bahamas nenhengo dzemhuri dziripo. Heino mufananidzo waJavier Bardem nemukadzi wake Vicky.
Javier Bardem Hupenyu Hwemhuri:
Icho chinhu che trivia chekuti parutivi kubva kuna amai vake vaanoda, vazhinji vevamwe veimba yake vakanganisa mutambi uyu ane tarenda. Pamusoro pezvo, kurudziro yetambo refu yevagadziri vemafirimu nevatambi pakati penhengo dzemhuri yake. Gara wakaisa apo isu tinokutora iwe kuburikidza nevabereki vake Javier Bardem uye nevamwe vese veimba yake.
Nezve Baba vaJavier Bardem:
Kutanga, baba vake vaive muridzi webhizinesi uyo akarerwa neMufudzi wemombe (muzukuru waJavier). Kunyangwe, akashaiwa kuraira kwekumhanyisa imba yake; pakupedzisira kutungamira kurambana kwake. Nekuda kwekurambana, vatambi vacho havana zita rekuti baba vake rinova José Carlos Encinas Doussinague.
Zvinosuruvarisa, Jose Carlos akafa muna 1995 mushure mekunge aonekwa aine Cancer yeRopa (Leukemia). Nguva pfupi asati abva pasirese, izvi ndizvo zvakange zvakaita baba vaJavier Bardem, José Carlos airatidzika kunge.
Nezve Amai vaJavier Bardem:
Kazhinji inozivikanwa sembiru yemhuri kubva pakurambana kwemurume wake, Javier mum zvinoreva zvese kwaari. Iye akambotsaurira mubairo wake wekutanga uye oscar kwaari. Amai vake, Pilar Bardem (akazvarwa María del Pilar Bardem Munoz) aivewo mutambi. Kazhinji anozivikanwa semunhu akarera vana vake ari ega. Heano maitiro anoita Pilar.
VERENGA Jean Reno Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Nezve hama dzaJavier Bardem:
Mutambi weSpanish ane vakoma vaviri vakuru vanoenda nemazita avo Carlos naMonica. Nguva pfupi Javier Bardem arambana nemubereki, iye pamwe chete naCarlos naMónica, vakave iro rega basa raamai vavo. Kunyangwe mumwe wehama yake akafa achangoberekwa. Heano Javier uye mumwe chete hama uye mutambi zvakare, Carlos Bardem.
Nezve Vana vaJavier Bardem:
Kuva baba, pa41, Javier, nemukadzi wake Penélope Cruz, vakazvara mwanakomana wavo Leonardo Encinas Cruz musi wa22 Ndira 2011. Mwana wechipiri nemwanasikana wekutanga, Luna Encinas Cruz, akazvarwa makore maviri gare gare. Bardem nemukadzi wake uye mwana wekutanga anoonekwa pano.
About Javier Bardem's Hama:
Kunyange vanasekuru vake (Rafael Bardem naMatilde Muñoz Sampedro) vaivewo vatambi. Babamunini vake, Juan Antonio Bardem, aive director. Nekudaro, ndeyeimba yevatambi uye mutambi zvakafanana. Pamusoro pezvo, aivewo nemukuwasha vanonzi Mónica Cruz naEduardo Cruz. Tarisai, Sekuru vaJavier, Juan Antonio Bardem.
Sekuru vababa vaJavier nasekuru-mbuya vaive José Encinas naFlora,
zvichiteerana. Zvakare, sekuru vake vaamai vaiva Rafael Bardem Solé akaberekerwa mu
Hupenyu Hwega hwaJavier Bardem:
Iye anozivikanwa kuve ane hushamwari uye zvakare, mukurumbira wechiRungu mutauri. Javier anodawo kutonhora nekuterera kune heavy metal music. Iwo rudo anoratidza kuda kwake kune rakaoma dombo uye rinorema simbi.
Uyezve, iye ndomumwe wevashoma vatambi veSpanish yekufamba neHollywood kubudirira. Izvi zvinouya kunyangwe paine chipingamupinyi chetsika chakazadza maindasitiri. Zvakare kucherechedza, muSpanish anoda kushandisa yakawanda yenguva yake yekusiya nemhuri yake. Anowanzovatora kuenda kuzororo.
Mararamiro aJavier Bardem:
Pasina mubvunzo, akapfuma kwazvo. Asides kufudza mari zhinji muHollywood, Javier mibairo yekuita mumafirimu eSpain yakamuita iye wevatambi vanobhadharwa zvakanyanya muSpain.
Nekudaro, mhasuru yake yemari yakati rebei yakave nechokwadi chekuti anokwanisa kupa mhuri yake zvakanakisa- kunyangwe kusvika kumota dzoumbozha. Iwe ane tsika yekusada kuonekwa achityaira supercars.
Javier anofarira kugara muimba hombe inotakurika. Akapedza chikamu chakanakisa chemakore ake achangopfuura mune mazana mana mazana mana emamita imba muWest Hollywood, Los Angles, California. Imba yake inofungidzirwa kuve yakakosha kutenderera '$ 3400 mamirioni. Munguva pfupi yapfuura, akatengesa imba uye mhuri yake yava kugara kuMadrid.
Javier Bardem's Net Kukosha uye Mubhadharo:
Kubva muna2018, muhoro waBardem waive uri kuburitsa $ 1.2million. Chokwadi ndechekuti, akahwina pamusoro Top 10 vanowana TV ye2018 naReese Witherspoon achibuda wechipiri.
MuSpanish, sa2020 ane mambure akakosha angangoita madhora makumi maviri emadhora. Kunobva hupfumi hwaBardem firimu uye terevhizheni.
Mushure mekuita ruramisiro kuna Javier Bardem's Bio uye nhoroondo yehupenyu, zvakakosha kutaura zvimwe chokwadi nezvehunhu hwemufirimu.
Chokwadi # 1: Nyota Yehupombwe:
Iyo Empire Magazine yakambodoma Javier Bardem semumwe wevane zana nyeredzi nyeredzi munhoroondo yemamuvhi. Kubuda senge ye100 sexiest haina kunyanya kuipa.
Chokwadi # 2: Imba Yekudyira:
Mhuri yaJavier Bardem, parutivi nekuita, zvakare ine yekudyira muMadrid, Spain inonzi
"La Bardemcilla". Hanzvadzi yaJavier, Mónica Bardem, vanomhanya muresitorendi.
Chokwadi # 3: Wira Murudo paChipiri Kuona:
Wanga uchiziva here kuti Javier anga asangana naPenélope Cruz kekutanga pane seti yeKomisheni muna 1992?… Panguva iyoyo, haana kumbodanana. Nekudaro, vaviri vacho havana kuzova vaviri kusvikira vashanda pamwe muVicky Cristina Barcelona (2008).
Chokwadi # 4: Mumiriri:
Javier ane mukurumbira semushandirapamwe. Akapa rutsigiro rwake kuzvikonzero zvakaita sekumisikidzwa kwewanano yeungochani. Hazviperi ipapo. Imwe ndeye kushandiswa zvisiri pamutemo kwemakambani emaminerari kuburikidza neakapihwa masimba emakambani.
MuSpanish muratidziri neGreenpeace inotarisa kuchengetedza makungwa neAntarctica. Uyu ndiye sezvaakamboenda kumigwagwa kunoda kuchengetedzwa kwemakungwa epasirese.
Chokwadi # 5: Chii chinonzi Chitendero chaJavier Bardem?
Kana iwe waisaziva, vabereki vake vakambomurera semuKaturike. Nekufamba kwenguva, akazova asingatendi (maonero ekuti Mwari hakuna kuzivikanwa kana kusazivikanwa.) Bardem anofunga kuti sainzi nekutenda “zvinofanirwa kuenda pamwechete” uye haatendi mune zvemweya.
se Alvaro Morte, Ndiye mumwe wevashoma maEuropean maActor avo vanodikanwa kwazvo neveChirungu vanoda mafirimu. Zviri pachena kuti mutambi wechiSpanish haana kumbove nehupenyu saka Rosey, kunyanya pahudiki.
Mhuri yemhuri yaJavier Bardem inoratidzirwa nekurambana kwemubereki wake uye kusakwana kwemari. Zvakangodaro, akaramba kurambidzwa uye akaramba achirwira kugona. Nhasi, vabereki vaJavier Bardem kunyanya amai vake vanodada nekuona izvo zvakaitwa nemwanakomana wavo pachiitiko chepasirese.
Isu tinovimba kuti iwe wawana Javier Bardem's Bio inonakidza uye inonakidza. Tichagara tichiita zvakanaka kukuchengeta iwe uchiwedzeredzwa nedzimwe nyaya dzehupenyu dzinonakidza nezve Vatambi veEuropean.
Kuti uone nekukurumidza kweBiography yake, heino yedu Javier Bardem Wiki tafura iyo inoputsa chokwadi pamusoro peSpanish.
Javier Bardem's Bio-Dhata
Zita rizere: Javier lngel Encinas Bardem
Zita rekudanwa: Javier bardem
Zuva rekuzvarwa: 1 yaKurume, 1969
Nzvimbo yekuzvarirwa: Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Canary Islands, Spain
Dzidzo: Escuela de Artes y Washington, Madrid, Spain
Baba: José Carlos Encinas Doussinague
Amai: Pilar Bardem
Mukadzi: Penélope Cruz
Vana: Leonardo Encinas Cruz (Mwanakomana) naLuna Encinas Cruz (Mwanasikana)
Vanun'una: Carlos Bardem (Hama) naMonica Bardem (Hanzvadzi)
Hama: Rafael Bardem naMatilde Muñoz Sampedro (Vanasekuru Vanasekuru),
Juan Antonio Bardem (Sekuru), Mónica Cruz naEduardo Cruz (Hanzvadzi
uye mukwasha mukuwirirana)
Sekuru vababa nasekuru-ambuya (José Encinas naFlora)
Sekuru amai (Rafael Bardem Solé)
Muhoro: $ Miriyoni 1.2 (2018)
Net Worth: $ Miriyoni makumi maviri (20)
Kunobva Pfuma: Firimu neTerevhizheni
kukwirira: 5 '11¼ "(1.81 m)
Hobbies: kuteerera mimhanzi yeheavy metal, Painting uye Playing Rugby
Ethnicity: ChiSpanish [chiCastilian neLeónese], ChiBasque, chiCatalan, 1 / 64th British Isles (Irish, Chirungu)
Chekupedzisira, kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka uchiverenga Jairo Bardem's Bio, usazeze kutibata nesu. Zvikasadaro, tiudze iwe zvaunofunga nezve muSpanish mune yedu chikamu chikamu.